यो मौसमी प्रताडना ! | चितवन पोष्ट
गृह » यो मौसमी प्रताडना !
पूर्वी नेपालको तराई मधेस र पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्लाहरुमा बढ्दै गरेको चिसोको कारण झण्डै डेढ दर्जन नागरिकको अकालमै मृत्यु भएको छ । जाजरकोटमा एक साताअघिदेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोका कारण नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सयभन्दा बढी बिरामी परेका छन् । मृत्यु हुनेमा अधिकांश बालबालिका र वृद्धवृद्धा छन् । चिसो बढेसँगै देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुमा बिरामीको चाप बढेको छ । चिसोसँगै भाइरल ज्वरोको प्रकोप अझै बढ्ने संभावना देखिएको छ । सम्पन्न व्यक्तिहरुभन्दा विपन्न वर्गमा शीतलहर र भाइरल ज्वरोको प्रकोप देखिएको छ । पश्चिम नेपालको जुम्ला र हुम्ला जिल्लामा तापक्रम माइनस ६ डिग्री सेल्सियससम्म रेकर्ड गरिएको छ । त्यस क्षेत्रको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ । मुगुमा पनि ५÷६ जना चिसोकै कारण मृत्यु भएको छ । पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्लामा विद्यालयहरु जाडोको कारण बन्द भएका छन् । तराईका जिल्लामा न्यानो कपडाको अभावमा गरिब र विपन्न समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरुको बर्सेनि चिसोले कठ्याँग्रिएर मृत्यु हुने गरेको छ ।
बढ्दो चिसोका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कोल्ड डाइरिया, ज्वरो, रुघाखोकी र स्वासप्रश्वासका बिरामीको संख्या बढेको छ । चिसोले दम, निमोनिया, कोल्ड डायरिया, घाँटी दुख्नेजस्ता समस्याले पीडित मानिसहरु बढेका छन् । चिसोको मौसमी प्रताडना भोग्नुपरे पनि सरकारले राहतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । तत्काल राहत उपलब्ध गराउन पीडित पक्षले माग गर्दै आएका छन् । पश्चिम र पूर्वी तराईमा बाक्लो हुस्सुसहित शीतलहर परेका कारण जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्न पुगेको छ । चिसोको कहरले हरेक वर्ष गरिब तथा विपन्न मानिसको अकालमै मृत्यु हुने गरे पनि सरकारले न्यानो कपडा वितरण गर्न सकेको छैन । तराईमा फुसको छानामा बस्नेहरुको आङमा न्यानो कपडा नपरेरै मृत्यु हुनुपर्ने नियति छ । महोत्तरी, सिरहा, सप्तरीलगायत धेरै जिल्लामा बसोबास गर्ने मुसहर, माझी, दलितलगायतका समुदाय चिसोको चपेटामा परेका छन् । उनीहरुलाई चिसोको कहरबाट जोगाउन ज्यान छोप्ने न्यानो लुगा र ओढ्ने–ओछ्याउनेको प्रबन्ध गर्नुका साथै चिसोका कारण बिरामी पर्नेहरुलाई उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन जरूरी देखिन्छ ।
अझैसम्म घर नबनाएका भूकम्पपीडित टहरोमै बस्न विवश छन् । तराईका जाडोपीडितलाई सरकारले चिसोबाट बच्न स्थायी उपाय सिकाएको छैन । यस्तै पहाडी क्षेत्रमा भूकम्पप्रभावितलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समयमै घर निर्माण गर्ने वातावरण नमिलाउँदा समस्या झनै बढेर गएको छ । यी सबै प्रतिकूल परिस्थितिको मार खेप्न विवश भएका छन्, गरिब र विपन्न जनता । केही दिनयता चिसो बढेको छ । तत्काल चिसोबाट जोगिन अस्थायी उपाय अपनाउनुको विकल्प छैन । पूर्वी तराईलगायत पश्चिम नेपालका क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि तैनाथ भइसकेकाले अब चिसोको चपेटामा परेकाहरुको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था जनप्रतिनिधिले थालनी गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम चिसोमा ओत लाग्न नसक्ने घरलाई शीत नचुहिने बनाएर पीडितका लागि लत्ताकपडा र खाद्यान्नसमेत व्यवस्था गर्नु जरूरी हुन्छ । चिसोमा झोलयुक्त तातो परिकारले स्वास्थ्य स्थिति सहज हुन्छ । त्यसैले सरकारले जनप्रतिनिधिमार्फत दाल, गेडागुडीलगायत खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्छ । चिसोको कहर सहन विवश जनताका लागि स्थायी उपाय खोज्नेतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
मह¤वाकांक्षी नगरसभाका योजनाहरु